Nantsi indlela umbala omtsha we-Samsung Galaxy ojongeka ngayo I-Androidsis
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukuthenga isixhobo bekufana nokuthenga ityala ukuze ubenako ukwenza ubuhle besiphelo, kuba uninzi beza kurhwebo ngombala omnyama kwaye wenziwe ngeplastiki, kodwa ibiyinto yakudala leyo, okoko iiterminal zale mihla zisinika ezinye iglasi kunye / okanye ialuminium ekugqitywe kuyo kufanelekile ukubeka isiciko.
Le fashoni, ngokungathandabuzekiyo exatyiswayo, ivumela iinkampani ezahlukeneyo ukuba zisungule imibala eyahlukeneyo yesiphelo esinye khuthaza intengiso kwakhona xa sele ikhona kwimarike kangangexesha elithile. Isamsung ijoyine eli qhinga kule minyaka idlulileyo kwaye ngoku iyayiphinda kwakhona.
Inkampani yaseKorea i-Samsung ibeke nje i-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 Plus kwintengiso e-China kwi-Ice Blue, umbala osinika okuhle I-gradient ukusuka esibhakabhaka esibhakabhaka iye kumhlophe qhwa.
Ngokumiliselwa kwalo mbala mtsha, inkampani ijoyina imeko yangoku yabanye abavelisi nikezela ngeetheminali ezimile ngokwenqanaba lombala, uyilo olunomtsalane kakhulu, izinto njengoko zinjalo. Ewe kunjalo, ukuze usebenzise i-smartphone ngaphandle koloyiko lokuyaphula ekwindla, kufuneka sifumane isiciko esingafihliyo.
Okwangoku, njengoko kwenzekile ngokusungulwa kweminye imibala kwamanye amazwe, lo mbala akulindelekanga ukuba ufikelele kumazwe amaninziUbuncinci ekuqaleni, kodwa kunokwenzeka ukuba ekugqibeleni baya kuthi, ngakumbi xa umhla wokuhlaziywa kwesiphelo usondela.
Samsung Akusekho ukhetho lokujonga eTshayina, intengiso yeefoni enkulu ehlabathini, ngenxa yokufika kwabavelisi abatsha abanjengoVivo, Oppo nabanye, abavelisi abanikezela ngeetheminali ezinexabiso lemali abanokuzidlula abenzi abambalwa kakhulu, ngakumbi abo bangazalelwanga kweli lizwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Yile nto umbala omtsha we-Samsung Galaxy ujongeka ngayo
Uyenza njani imixholo emnyama kwinkqubo yoQhakamshelwano